Mid ka Mid Musharixiinta Jubba Land oo Beeniyay in Shirkii Kismaayo ay Hoosta ka Riixeysey Dawladda Kiinya – idalenews.com
Sheikh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah Musharixiinta u taagan Madaxtinimada Jubba land ayaa ka hadlay hawlaha Doorashooyinka iyo Shirkii ka socday Magaalada Kismaayo.
Siyasigan ayaa sheegay in Dawladda Kiinya aysan wax shaqo ah ku lahayn shirweynaha Kismaayo ka socda iyo Doorashada iminka la sugayo in dhawaan halkaa lagu soo doorto Madaxweynihii Jubba Land.
Musharaxan Shiikh Shakuul ayaa sheegay in figradda ay ka soo fushay Dad Soomaali ah islamarkaana Kiinya ayasan wax shaqa ah ku lahayn hawlihii ka dhacay Magaalada Kismaayo ee marxaladaha kala duwan soo maray.
Sheikh Shakuul oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay aqoonsi la’aanta dhinaca dawladda Federaalka Soomaaliya ee Maamulka Jubba Land wuxuuna raja wanaagsan ka muujiyay in maalin uun maalmaha ka mid ah ay arrimahaas iska dhamaan doonaan dawladduna ay tahay Dawladdoodii oo aysan marnaba mucaaradayn waa siduu hadalka u dhigaue.
Sheikh Maxamed Ibraahim oo ka hadlay waxa dhici kara marba haddii ay waayaan aqoonsiga Xukuumadda Dhexe ayaa sheegay in sedax arriimood ay dhici karaan isagoo tan hore uu ku sheegay in ay dhacdo in qabiilama koox ay halkaa iska haysato iyadoon cidna xiriir la lahayn in Koox Xukuumadda ka soo hor jeedda ay halkaa haysato ama in ay haysato Koox Xukuumadda hoos timaada maamulkooduna uu haatan labada hore uusan ahayne uu yahay mid ladoonayo in la hoos keeno Dawladda Federaalka Soomaaliya.
Si katsaba hadalkan Musharaxa u taagan Madaxtinimada Jubba Land ayaa waxa uu imaanayaa xilli si weyn loo sugayo Doorashada Madaxtinimada Jubba Land.